Edinson Cavani oo la cadeeyay in uu ku laaban doono Serie A - Jazeera FM
Edinson Cavani oo la cadeeyay in uu ku laaban doono Serie A
February 14, 2018 admin featured
Weeraryahanka Kooxda Paris Saint-Germain Edinson Cavani ayaa la filayaa in uu dib ugu laaban doono Serie A, ka hor dhamaadka Xilli Ciyaareedkan.
Dulaalka Cayaariyahan Cavani” Fernando Guglielmone ayaa kalyantigiisa kalo soo shaqeeyay waayihiisa Palermo iyo Napoli, balse hada aamisan in uu ku laaban doono Serie A, kaddib isku dhacii Neymar iyo isaga.
Sida ay ku waramayso Jariirada Calciomercato” Cayaariyahan Cavani ayaa kula jira Kooxda Parc des Princes hishiis ilaa iyo sanada 2020-ka balse dulaalkiisa ayaa aaminsan in Edinson Cavani uu dib ugu laaban doono Kooxdiisii hore ee Napoli.
Si kastaba ha ahaatee, Xiddiga heerka Caalami ee Wadanka Uruguay Cavani oo 30-jir ah ayaa la filayaa inuu ku soo bilaaban doono kulanka Caawa ee Champions League, kaas oo Kooxdiisa ay ku wajahayaan Real Madrid garoonkeeda Santiago Bernabéu Stadium.
The post Edinson Cavani oo la cadeeyay in uu ku laaban doono Serie A appeared first on Wararka Ciyaaraha.
← Higuain oo ka xumaaday Rigoorradii uu ka qasaariyay Kooxdiisa
Marcos Rojo oo taam u ah kulanka Sabtida, xilli Mou uu liiskiisa ka qubay Smalling iyo Phil Jones →